Aroon လှို - MT4 အညွှန်းကိန်းများ
နေအိမ် MT4 အညွှန်းကိန်းများ Aroon လှို
အားဖြင့် ဂျိမ်းစမစ် -
မေ 26, 2018
ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ကြီးစွန်းသတ်မှတ်, ကိုယ်ဘယ်အချိန်မဆိုဘောင်ပေါ် = အသွင်ကူးပြောင်းမှုနှင့်ပြောင်းပြန်မီးမောင်းထိုးပြ.
အဆိုပါလှိုလျှင်မြန်စွာစျေးနှုန်းလမ်းကြောင်းသစ်နဲ့အလျားလိုက်ကြားကာလများနှင့်ပြောင်းပြန်အတွက်စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှု၏အစအဦး၏အဆုံးတွေ့ရှိ. အဆိုပါ Aroon လှိုအဆိုပါ Aroon Up ကိုနှင့် Aroon Down အကြားကွာခြားချက်အဖြစ်တွက်ချက်. အဆိုပါ Aroon လှို၏တန်ဖိုးအကြားအခါအဆိုပါပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်တက်လမ်းကြောင်းသစ်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည် 40 နှင့် 100. အဆိုပါ Aroon လှိုအကြား၎င်း၏တန်ဖိုးများကိုစောင့်ရှောက်ရသောအခါအဆိုပါပြင်းထန်သောဆင်းလမ်းကြောင်းသစ်မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ် -40 နှင့် -100.
တစ်ဦးကရိုးရှင်းပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် Aroon လှိုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နေစဉ်ဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါလှိုအပြုသဘောတဦးတည်းဖို့အနုတ်လက္ခဏာဒေသကနေလှုံ့ဆော်ပေးသည့်အခါဝယ်ခြင်း, ဆန့်ကျင်ဘက်အခြေအနေ၌ရောင်းချ.
Aroon လှိုတစ် Metatrader ဖြစ်ပါသည်4(MT4) အညွှန်းကိန်းများနှင့် Forex ညွှန်ပြချက်၏အနှစ်သာရမှာစုဆောင်းသမိုင်းဒေတာအဖြစ်အသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်တယ်.
Aroon လှိုသာမန်မျက်စိမှမမြင်ရတဲ့သောစျေးနှုန်းဒိုင်းနမစ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောပိုင်ထိုက်သောနှင့်ပုံစံများကို detect လုပ်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ထောက်ပံ့.
Aroon Oscillator.mq4 install လုပ်နည်း?
Aroon Oscillator.mq4 Download
သင့်ရဲ့ Metatrader Directory ကိုမှ Aroon Oscillator.mq4 copy / ကျွမ်းကျင်သူများက / အညွှန်းကိန်းများ /
Aroon Oscillator.mq4 ပေါ်မှာ Right click နှိပ်ပြီး
indicator Aroon Oscillator.mq4 သင့်ရဲ့ဇယားအပေါ်ရရှိနိုင်ပါသည်
သင့်ရဲ့ Metatrader ထံမှ Aroon Oscillator.mq4 ဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို4ဇယား?